Isaladi yeembotyi ezimhlophe kunye ne-zucchini kunye neeprawn | Ukupheka kweKhitshi
Isaladi yeembotyi ezimhlophe kunye ne-zucchini kunye neeprawn
UMaria vazquez | | Isaladi
Akukho veki ukuba iimbotyi aziyonxalenye yemenyu yam. Ndidla ngokuzibandakanya ubuncinci kabini kwizidlo zam. Ebusika ngohlobo lwesityu; ngoku, ngexesha lasehlotyeni, ikakhulu ngohlobo lwesaladi. Ngaba Isaladi yeembotyi ezimhlophe Ndiza kuyilungiselela nge-zucchini kunye ne-prawns, ngakumbi, kwiveki ephelileyo.
Isaladi lolunye uhlobo olukhulu dibanisa iimbotyi, imifuno kunye neziqhamo kwaye ke uzuze ipleyiti epheleleyo. Ngokutsha, kuba kule meko zonke izinto ezifakiweyo zibandayo kwisaladi ngaphandle kwe-zucchini, ekuphela kwesithako endisiphekileyo.
Enye yeenzuzo zolu hlobo lwesaladi kukuba inokulungiswa kwangaphambili. Ungabashiya benze into yokuqala kusasa kwaye ubabeke efrijini de kube lixesha lesidlo sasemini, bakwazi ukonwabela ulwandle okanye iintaba ngoxolo okwangoku. Ngaba unesibindi sokuyilungiselela?
Le Bean i-White, iZucchini, kunye ne-Shrimp Salad yindlela efanelekileyo yehlobo. Isaladi ehlaziyayo negqibeleleyo.
1 ingqayi yeembotyi ezimhlophe
1 itswele yasentwasahlobo
I-12 yeetapile zetamatato
I-prawns ezingama-24 eziphekiweyo
½ ibhola mozzarella itshizi
Z zucchini ezinkulu
Sihlamba iimbotyi phantsi kwetephu yamanzi abandayo kwaye uwakhuphe.
Sifaka kwisitya sesaladi iimbotyi kunye neetumato zetsheri ezisikwe phakathi, i-prawns eziphekiweyo, i-chives kunye ne-mozzarella cheese
Ke Sinqunqa i-zucchini kwiityhubhu, isizini kunye nesosi ngetispuni yeoyile kwipani yokutshiza ide ithathe umbala kwaye ithambile.
Yongeza i-zucchini kwisaladi emhlophe yeembotyi kunye ixesha ngeoyile, ityuwa kunye neviniga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Isaladi » Isaladi yeembotyi ezimhlophe kunye ne-zucchini kunye neeprawn
Iipancakes zecoconut ezinetshokholethi eshushu
I-Puff pastry kunye nekhekhe lekrimu